Home Wararka Xasan Sh Maxamud: Guusha la Filayo ee Dacwadda Badda Ummada Somaliyeed ayaa...
Xasan Sh Maxamud: Guusha la Filayo ee Dacwadda Badda Ummada Somaliyeed ayaa iska leh Annagana iyadaan Adeege u ahayn.
Guusha Dacwadda Badda oo dhawaan la rajeynayo inay sooo gabagabowdo waa guul ummada Somaliyeed u soo hoyatay waana arrin mudan in si aad ah loo weyneeyo oo la isugu hambalyeeyo. Arrinkan kuma iman si fudud ducada ummadda iyo dadaalka intii ka shaqeysay ayuu ku yimid , waxaana wax laga xumaada ah mid ka mid ahaa tiirarkii guusha walaalkeen Maxamed Sheekh Saalixi inuusan nala joogin oo rabbigeen oofsaday wuxuusa nooga tagay dahaxal aad u weyn oo umadda u aayi doonto.
Dhab ahaan kaligiis maaha dadka guusha mudnaanteeda iyo maamuuskeeda leh waxaasa jira kuwa nool oo mudan in lagu abaalmariyo hawshii ay qarankaan u qabteen. Maantoo kale qof iyo qabiil toona maaha cidda sharafta mudan ee waa cid kasta oo gacan ka geysatay hawshaan iyo qofkasta oo Somali ah waxayna la mid tahay maalintii gobanimada waayo qeyb ka mid dhulkeenna ayaa ku wareegi karay gacan kale taas oo ahaan lahayn boog aan naga harin duulkeenna qarnigaan nool.
MW Xasan Sheekh ayaa la kulmay Eng. Maxamed Sheekh Saalixi isagoo bandhig sameynaya waxaana uu ka codsaday inuu ku soo biiro dowladda oo uu arrinkaan daraasad iyo baaris intaas ka badan ku sameeyo, kadibna waxaa soo baxday in loo baahan yahay in la badiyo dadka shaqadaan inay qabtaan ay tahay .
MW Xasan Sheekh markii u dhageystay Eng. Saalixi dibna u eegay dhamaan sharciyadii ka yaallay aarinkan waxaa uu qaatay go’aan ah inay dowladiisa ka hawlgasho oo sharcinimada baddeenna iyo lahaanshaheeda loo hawlgalo. Bangdhigii Eng. Saalixi ayaa waxaa lagu ogaaday macluumaad badan oo arrinkaan la xiriira, kadibna MW Xasan Sheekhh waxaa uu go’aansaday in si degdeg ah loo raadiyo xogta buuxda arrinkaan ku saabsan. Hawshaas qaaliga waxaa dhabarka u ridatay walaasheen Mar Fawzia Xaaji Aden waxayna bilowday inay UNCLOS ka soo xog, hasa yeeshee waxaa iyana waddaniyad qalbigeedu ku weyn la soo dhaqaaqaday Muna Sharman oo Fowzia la soo doonatay xog arrimahan ku saabsan, kadib markii ay isku arkeen Magaalada New York. Mar alla markii la isu soo dhoweeyey warbixinnada waxaa degdeg u amray MW Xasan sheekh in la dhiso koox khubaro sharciyaqaanno ah iyo kaaliyayaal dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ka taageera.
Haddaba Bishii Juun 30kedii 2014 Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud wuxu shaaciyey (Proclamation) sharci baddeedkii Law No.11 February 1989; Decree No.14 February 9, 1989; Law No. 5, 26 January 1989. Sharcigaa wuxuu madaxweyne Xassan ku caddeeyey in EEZ-ka ama aagga dhaqaalaha Soomaaliya yahay 200 NM.
Kadib, waxaa wada hadal saddex weji ahaa oo socon waayey lala yeeshay dalka Kenya.
28 August 2014 Soomaaliya waxay u gudbisay dacwad lid ku ah sheegashada dhul-badeedkeenna ee Kenya Maxkamadda Caalamiga ah. Soomaaliya waxay ka codsatay maxkamadda in ay dhammaan eegto seddex waxyaabooda oo kal ahaa Dhul badeedka, Aaga dhaqaalaha iyo Qalfoofka Qaaradeedka.
7 October 2015 – Kenya waxay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ qoraal ay ku doodayso inaysan maxkamaddu xaq u lahayn inay eegto muranbadeedka ka dhexeeya iyada iyo Soomaaliya. Waxay Kenya ku doodday in labada dal ay galeen heshiis is afagarad ah oo caalami ah (MOU-ga). Heshiiskaas oo caddaynaya habka loo abbaarayo xallinta muran-badeedka ayay sheegtay. Maxkamadda Caalamigu markay heshay qoraalkaa Kenya waa ay hakisay dacwadda ilaa inta Soomaaliya jawaabteeda la helayo.
2 February 2017 Maxkamadda Cadaaladda ee Qaramada Midoobay ayaa go’aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Xaakimiinta Maxkamadda ayaa u caddeeyay kiiska ka dib markii ay ka hadleen sharci ahaanta doodda Soomaaliya iyo diidmada Kenya.
Haddaba waa maalintaas marka ay guusha Somaliya Gaartay, laakiin Kenya waxay si xirfadeysan u lug jiidday inuusan go’aanka soo bixin ilaa ay ka ogaanayaa inuu Madaxdweyne ku soo bixi karo Farmajo oo ay ku ogaayeen inuu ka dheganugul yahay Xasan Sheekh oo dhulka, badda, hawada iyo Dadka Somaluyeed ay lama taabtaan u yihiin waxkasta oo kalesa waa laga wada hadli karaa qaba.
Marka aad dib u eegtid baraamijkii lixda tiir ee Xasan Sheekh lagu doortay gaar ahaan tiirka nabadgelyada waxaad ogaaneysaa inuu ku jiray qeyb ah Nabadgelyada Badda taasoo micnaheedu yahay in Xasan Sheekh barnaamijkiisa ay ka mid ahayd ilaalinta badaha Soomaaliyeed, inkastoo ay doorasho oo ay u adkeyd in si cad bannaanka loo soo dhigo, haddana baraarugga arrinka badda waa la jiray Xasan Sheekh.
Kenya iyo Farmajo dhowr jeer ayey isku dayeen inay xal ka baxsan kan maxkamadda bannaanka ku gaaraan hasa yeeshee culeyska iyo hawsha dhumucda leh ee shacbiga Somaliyeed qabteen ayaa Farmajo u diiday inuu taako ka mid ah wax ka badali karo. Waxaa uu Kenya u ogolaaday dhowrjeer in aan lagu dhawaaqin go’aanka Maxakamadda. Sannidhii ugu dambeeyeyna waxaa uu ka shaqeynayey inuu la sugo haddii doorasho lagu khasbo sida hadda dhacday inuu u isticmaalo inuu shacbiga ku kacsado oo uu ka dhigto guul uu doorashada ku galo.
Isku soo duub, shacbiga Somaliyeed waa sida libaaxa oo nin ganay iyo nin galladay way kala garanayaan, xataa haddii uu Farmajo u adeegsado ololaha doorashada waxay ka xumaan lahayd iyadoo aan guul noo iman marka haddiiba ay tahay guul dalka dhexdiisa lagu sarrifanayo waa guul ummadda u soo wada hotay, waxaana mudan in billaado la siiyo dadkii ka soo shaqeeyey si qarankan uu u yeesho halyeeyo lagu daydo waana sida ummadaha dunida ay dadkooda ku dhiirigeliyaan inay wanaang sameeyaan oo waxaa sannad walba la aqoonsadaa ciddii guul dalkeeda u soo hoysay.